ကိုယျ့အမရဲ့ သတိုးသားလောငျးကို မွူဆှယျမိတဲ့ မိနျးကလေးအဖွဈ - Daily News
သဟေဲ့ ဆိုပွီး ကြှနျတျော တျောတျောလေး လနျ့သှားတယျ။ ဘာစကားမှတောငျ ပွနျမပွော နိုငျဘူး။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီကောငျမလေးကဆကျပွောပါတယျ ညီမတော့ အိပျခနျးထဲ သှားတော့မယျ။ တကယျလို့ နောကျဆုံး အနနေဲ့ အတူတူ ပြျောမွူးခငျြတယျဆိုရငျ ညီမဆီ လာခဲ့ပါနျောတဲ့ ကြှနျတျော ခကျြခငျြးပဲ ခြာခနဲ လှညျ့ပွီး ကြှနျတေျာ့ ကားဆီ သှားဖို့ အိမျရှေ့ တခါးမကွီးဆီ
လြှောကျသှားလိုကျတယျ။ တံခါးကို ဖှငျ့လိုကျတယျ ဆိုရငျပဲ ဟိုကျရော့ တမိသားစုလုံး ပါလား! ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ယောက်ခမလောငျး မိသားစု ပေါ့ဗြာ။ အားလုံး လကျခုပျတှေ တီးနကွေတယျ။ ယောက်ခမထီးကွီးဆို မကျြရညျတှေ ဝဲလို့ ကြှနျတေျာ့ကို လာဖကျတယျ
“အဖတေို့က သားရဲ့ ကိုယျကငျြ့တရားကို စမျးခဲ့တာကှာ“ သားအောငျမွငျခဲ့တဲ့ အတှကျ အရမျးကို ဝမျးသာ မိပါတယျကှာ။ ကနြျော နောကျဆုံး ယောကျြားထုကွီးကို ကိုယျတှေ့ ပညာပေး စကားလေး ပွောခငျြတာ ကတော့
လက်မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်။သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။ သူ့ညီမလေး ဘယ်လောက်ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလဲဆိုတာ ပြောရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။
ညနေမှ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖို့ သူ့ကို မှာထား တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ သူ့ညီမလေးနဲ့ စကားပြောနေတုန်း သူ့ညီမလေးက ကျွန်တော့် အနားကို ကတ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောတယ်။ သူ့အစ်မနဲ့ လက်မထပ်ခင်ကျွန်တော့် တစ်ဘဝလုံးကို သူ့အစ်မဆီ လုံးဝ မပုံအပ်လိုက်ခင်၊ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ကြိမ်လောက် ဖြစ်ဖြစ် အတူတူ ရှိနေချင် တယ်တဲ့။
သေဟဲ့ ဆိုပြီး ကျွန်တော် တော်တော်လေး လန့်သွားတယ်။ ဘာစကားမှတောင် ပြန်မပြော နိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီကောင်မလေးကဆက်ပြောပါတယ် ညီမတော့ အိပ်ခန်းထဲ သွားတော့မယ်။ တကယ်လို့ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ အတူတူ ပျော်မြူးချင်တယ်ဆိုရင် ညီမဆီ လာခဲ့ပါနော်တဲ့ ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ချာခနဲ လှည့်ပြီး ကျွန်တော့် ကားဆီ သွားဖို့ အိမ်ရှေ့ တခါးမကြီးဆီ
လျှောက်သွားလိုက်တယ်။ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ဟိုက်ရော့ တမိသားစုလုံး ပါလား! ကျွန်တော့်ရဲ့ ယောက္ခမလောင်း မိသားစု ပေါ့ဗျာ။ အားလုံး လက်ခုပ်တွေ တီးနေကြတယ်။ ယောက္ခမထီးကြီးဆို မျက်ရည်တွေ ဝဲလို့ ကျွန်တော့်ကို လာဖက်တယ်
“အဖေတို့က သားရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို စမ်းခဲ့တာကွာ“ သားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာ မိပါတယ်ကွာ။ ကျနော် နောက်ဆုံး ယောက်ျားထုကြီးကို ကိုယ်တွေ့ ပညာပေး စကားလေး ပြောချင်တာ ကတော့
“သတိ – သင့် ကွန်ဒုံးကို ကားထဲမှာ သေချာသိမ်းပါ ”